Very interesting futhi engavamile Luhambo ngo Sochi kuthathwa njengesibikezelo esiyiso Ahun entabeni ende, okuyinto welula eduze Black Sea coast, amakhilomitha amahlanu. ngisho legends ambalwa elihlobene ne ivelaphi. Omunye wabo uyachaza igama lendawo ukuthi abantu ngaphambili ngokuyinhloko wahlanganyela nemfuyo kanye njalo ubheke abawunikwe uNkulunkulu abavikela okuthiwa Akhun. Enye igama lentaba ixhuma abakhileyo asendulo Abkhaz, ngubani Akhun noma Ohunov kusho "ikhaya okusezingeni eliphezulu" noma "entabeni, intaba".
Mount Akhun (Sochi) izivakashi nezivakashi emaphethelweni isikhathi eside kakhulu iziphethu zalo zokwelapha kanye nemvelo engavamile. Lapha ake wama ibandla lika Krestu enhle kakhulu, njengoba kufakazelwa amanxiwa alo ukuthi kukhona kulezi zindawo, futhi ukunakekela-umlando buffs. Ngo Sochi Museum, eyethula izivakashi umlando nemvelaphi kanye nokuthuthukisa umuzi, igcinwe ingxenye izakhiwo zethempeli eqoshiwe enhle kakhulu. Maphakathi nawo-namathathu banesifo esibi leminyaka XX-th phezu kwesiqongo sentaba kwaba ngisho umbhoshongo sibhekile yakhiwa kuleli isitayela Romanesque futhi ephakathi komgwaqo egandayiwe kuso. Ngaphezu kwalokho, abathembekile basembhoshongweni ungabona ogwini olungaphesheya yoLwandle Olumnyama nezwe elingasogwini Turkish. Ngena esiqongweni sentaba ngangokunokwenzeka yemoto emgwaqeni omkhulu, futhi udabule Aguri ensungubezini kwi umzila.
Amazing isithombe kwelanga kuvula Mount Akhun ekuseni kulabo abafisa ukubona ubuhle obunjalo. Ishayisa zokhahlamba Agura futhi Hosta River wadala emhlabeni Ahune izigodi olunothile futhi buhlukaniswe ezintabeni eziseduze. Futhi umphumela ukusika emfuleni Matsesta Paleogene ezifakwa kule ndawo Ukwakheka kwezitho hydrogen sulfide imithombo yezokwelapha ezibe nomthelela edolobheni resort of Sochi udumo (phetho ukuvela inqwaba izikhungo zezempilo kanye nezibhedlela).
Abahlukile nabadumile ukuze uthole ezihlukahlukene izimila aluncela, futhi lokho kuncike ohlangothini ukukhanya, kunokuba izinga lamanzi olwandle. Mount Akhun, eyashayisa ezozibonela ubuhle bayo esithombeni, indawo ezithakazelisayo kakhulu emthambekeni eningizimu-nempumalanga ye-Khosta yew-boxwood Grove. Tees - isihlahla relict, eyabonakala engaphezu kwenkulungwane edlule futhi ngenxa amnyama obomvu zinokhuni oluyigugu kakhulu ezaziwayo. Abaningi babe yew isiqu mayelana amamitha amabili ububanzi.
Abahlukile siluhlaza boxwood futhi sihlobana preglacial isikhathi futhi baziswa ukhuni aminyene futhi okuqinile esetshenziswa womshini eziyisikhumbuzo.
Mount Akhun iyikhaya izitshalo eziningi kangaka futhi izilwane, ezingavamile, ezisengcupheni futhi ezisohlwini Incwadi Red.
Ukuze shí esikhathini sangaphambi glacial futhi kancane kancane ukuza namuhla, kubalulekile ukuba kudlule nokuvakasha ngezinyawo kuya phezulu ezifana ezikhangayo Sochi intaba Akhun. Lapha ungakwazi ukubona omile sea urchin zidla, Paleocene futhi Upper Cretaceous limestone izingqimba, eziningi emihumeni imfihlo futhi ezihosheni enhle. Buka edwaleni ngokubabazekayo Prometheus, kakhulu amahle Agurskii impophoma ezimbili isigaba nabathandekayo ezimbili ezincane ngaphezulu kungabonwa ikakhulu ngesikhathi konyaka, lapho namanje ezimanzi, iya emthonjeni fresh acime ukoma kwawo, ukuze simazi kangcono eziningi izitshalo ezingavamile, okuyinto engazange yenzeke ubone okuningi.
entabeni abahlukile futhi ngokubabazekayo Akhun isimo sawo. It elijabulisa ngokomoya hhayi kuphela. Kukhona futhi amathuba ukugibela abathanda. Akekho ongaba bahlala banganandaba ngokuvakashela Umhlaba kuyisimangaliso.
Ulimi emphinjeni evuvukele